သက်တန့်ချို: ဆေးကျောင်းသားကြီးတွေနဲ့ ဆေးကျောင်းသင်ဆရာဝန်ကြီးတွေ ၊ ပြင်ညာရေးစနစ်နှင့် Professional ဟုခေါ်သော . .
ဆေးကျောင်းသားကြီးတွေနဲ့ ဆေးကျောင်းသင်ဆရာဝန်ကြီးတွေ ၊ ပြင်ညာရေးစနစ်နှင့် Professional ဟုခေါ်သော . .
တပည့်ကိုးဆယ့်ကိုးယောက်ကို ကျောင်းကထွက်ခွင့်ပြုပြီး ဆိုးတဲ့တစ်ပည့်တစ်ယောက် ကိုလက်ခံ လိုက်တဲ့ဆ ရာအကြောင်း ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်မနေ့က Renew ပြန်လုပ်လိုက်တော့ ကျွန်တော့်အတွက်ရေး စရာ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်က ထပ်ရလာပြန်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းကိုဇော်ကတော့ပြောတယ် ။ သူဆောင်းပါးတွေမရေးချင်ဘူးတဲ့ ဆောင်းပါးဆိုတာ . . လူတွေကို စောင်းမြောင်းပြီးပါးရိုက်တာ တဲ့ ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဆရာလူထုစိန်ဝင်းတို့ ဆရာဇော်ဇော်အောင်တို့ ဆောင်းပါးတွေ ဖတ်ပြီး အဲဒီလိုပုံစံလေးတွေပဲ ရေးချင်နေလို့ ဆောင်းပါးကို နည်းနည်းတော့အားသန်မိတယ်ဆိုတာ ၀န်ခံပါတယ် ။ သူများကို ပါးရိုက်တာလားဘာလားတော့မသိဘူး ကျွန်တော်ကတော့ ပါးအရိုက်ခံရကိန်းမြင်မိတယ် ကိုဇော်ရေ ။ လက်ရှိ ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားတဲ့ အတိုင်း ဆေးလောက မှာရှိတဲ့ တပည့်နဲ့စာသင်ဆ ရာဝန်ကြီးတွေ ၊ Professional လို့ခံယူထားတဲ့ Medical ဆေးလော ကအကြောင်း နဲ့ ပြင်လိုက်ညာလိုက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ ပြင်ညာရေးစနစ်ကို အနည်းငယ် ချရေးကြည့်ပါဦးမယ် ။ တကယ်တော့ မနေ့က ပြန်လည်ဖော်ပြထားတဲ့ ဆိုးတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို လက်ခံပြီး တော် တဲ့ကျောင်းသား ကိုးဆယ့်ကိုးယောက်ကို လက်ခံလိုက်တဲ့ ပုံပြင်လေးရဲ့ ဆိုလိုရင်းကို တော်တော်များများ မဆွဲထုတ်မိကြဘူး ။ တကယ်ဆိုလိုရင်းက " ဆရာတို့မည်သည် ပညာရည်ပြည့်ဝပြီ လောကကြီးအပေါ် ကိုယ့်ခြေထောက်နှင့်ကိုယ်ရပ်တည်နိုင်ပြီဟု ယူဆသော ကျောင်းသားများကို သာ ကျောင်းက ထွက်ခွာခွင့်ပြုသည် ဆိုးသွမ်းသော တပည့်အား လမ်းမှန်ရောက်အောင်ပြုပြင်ပေးရန် ဆရာ့တွင်တာဝန်ရှိ သည်ဟူသော ဆရာ၏ စေတနာကို ပေါ်လွင်စေချင်သော မူရင်းစာရေးသူ၏ ရည်ရွယ်ချက်ပင်ဖြစ်သည် ။ ထပ်ပြောရလျှင် မိဘတို့သည် တောင်းစုတ်ပလုံးစုတ်ကိုသာ စွန့်ပစ်ရိုးရှိသည် သားသမီးဆိုးကို မစွန့်ပစ် ယူသော မိဘမေတ္တာအတိုင်း ၊ ဆရာဝန်သည် လူနာအသက်ကို နောက်ဆုံးအချိန်ထိ လက်မလွှတ် ဟူသော စေတနာအတိုင်း ဆရာသည်လည်း တပည့်တစ်ယောက်ကို နောက်ဆုံးအချိန်ထိ ပဲ့ပြင်ဆုံးမပေး သည်ဟူသော စေတနာကို ထင်ဟပ်စေတဲ့ အရမ်းကို ကောင်းတဲ့ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ပါ ။ ဒါပေမယ့် . . . ရည်ရွယ် ချက် ကို ဖတ်လို့ လွဲသွားတဲ့အခါ မထင်မှတ်ပဲ
- တပည့်၁၀၀ မှာ ဆိုးတဲ့ လူကိုကျတော့ ဆက်ထားပီး လိမ္မာ တဲ့ သူကျတော့ ကျောင်းကထွက်တဲ့ဟားးး ဆရာက ဥပမာပေးထားတယ်ထင်ပါတယ် ဆရာဆိုတာ အဲလိုလူမျိုး ပေါ့ (ဒါသည် ပုံပြင်ကျောရိုးကိုဖတ်ပြီး ဘာလဲဆိုတဲ့ဦးတည်ချက်ကို ဆက်ပြီးမတွေးတော့တဲ့သဘောပါ ဘာကိုပေးချင်တာလဲ တကယ်ကပုံပြင် တစ်ပုဒ်ပါ ပုံပြင်ဆိုတဲ့အတိုင်းအပြင်မှာတော့ဘယ်ရှိပါ့မလဲ သူ့ဆိုလိုရင်းက ကျွန်တော်အပေါ် မှာပြောထား ခဲ့တဲ့အတိုင်း ပြန်ဖတ်ကြည့်ကြပါ )
- တခါတရံ ဒီလိုပုံပြင်တွေဟာ နားထောင်လို့ ကောင်းရုံသတ်သတ်ပါပဲ။ တကယ့် လက်တွေ့ နဲ့သွားနှိုင်း လို့ မရပါဘူး။ စာရေးကောင်းတယ်ဆိုပြီး လျှောက်ဝါဒမဖြန့် ပါနဲ့ ။ ဆရာဆရာမတွေ ကို စော်ကားနေ တယ်လို့ ခံစားရလို့ ပါ။ (ဒီနေရာလေးမှာ ၀ါဒဆိုတာလေးလည်း ပြောချင်သေးတယ် ၀ါဒဆိုတာ ကိုယ်သန်ရာသန်ရာ မှန်မှန်မှားမှား . . . ဒါယုံကိုယုံရ့မယ်ဆိုပြီးလုပ်တဲ့ အရာမျိုးပါ ကျွန်တော်က စာရေး တယ် မှန်တယ် မှားတယ် ဘာတွေ ယူရမယ် ဘာတွေမယူရဘူးဆိုတာက စာဖတ်တဲ့သူတစ်ယောက် တာဝန် ပါ ကျွန်တော်ရေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ဆရာတွေစေတနာကိုပေါ်လွင်စေချင်မှန်းရေးတဲ့စာ တချို့ တလေ အဲဒီ ဆိုလိုရင်းကိုနားလည်လိမ့်မယ် ဒါပေမယ့် အခုမှတ်ချက်ထဲကလို ဆရာဆရာမတွေ ကို စော်ကားနေခြင်းရှိမရှိ သေချာလေးပြန်စဉ်းစားချင်တယ် ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြောသလိုပေါ့ သင့်မှတ်ချက်ဟာ သင့်ကိုယ်သင် စာဖတ်အား ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ ဘာတွေ absorption လုပ်နိုင်လဲ ဖော်ပြနေ တာပဲတဲ့ ဒါကြောင့် မှတ်ချက်တစ်ခုရေးတဲ့အခါ သေချာ ရှုထောင့်ပေါင်းစုံ ကစဉ်းစားစေချင်တယ် ။ စာရေးသူတစ်ယောက်ရေးတဲ့စာ အကုန်လုံးလက်ခံရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး ။ အကုန်လုံးမှန်တယ် လို့လည်း မဆိုလိုပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် Thinking Concept ကို တော့ ကျွန်တော် တို့အတော်မွေးမြူကြရလိမ့်ဦးမယ် )
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆေးတက္ကသိုလ်တွေအနေနဲ့ ဆေး ၁ ၊ ဆေး ၂ ၊ ဆေးမန်း ၊ မကွေးဆေး ဆိုပြီးရှိကြတယ် ။ ဆေးတက္ကသိုလ် ကို ၀င်ရတဲ့ အမှတ်ချင်းကလည်း ယောက်ျားလေးနဲ့ မိန်းကလေး အတော့်ကို ကွာခဲ့တာ ခေတ်အဆက်ဆက်ကတည်းကပါ ။ ဘာလို့လည်း ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ် ။ စာတော် တဲ့မိန်းကလေး ဦးရေကပိုများလို့လား စာတော်တဲ့ယောက်ျားလေးဦးရေကပိုနည်းနေလို့လား ဒါမှမ ဟုတ် ယောက်ျားလေးတွေ ကို အမှတ်လျော့ပေးထားတာ ယောက်ျားလေးတွေက မိန်း ကလေးတွေလောက်အ ရည်အချင်းမမှီဘူးလို့ ဆိုလိုတာလား ။ ထားပါတော့ တကယ်တော့ ယောက်ျားလေး ဦးရေကို ပိုပြီး ဆေးလောကထဲ ပါစေချင်လို့ လို့ပဲ တွေးယူလိုက်ပါတယ် ။ တနိုင်ငံလုံးမှာ ဂုဏ်ထူးတွေရပြီး စာတော်တယ်လို့သတ်မှတ်ခံရတဲ့ကျောင်းသားတွေထဲက အချို့ဟာ ဆေးကျောင်းကို ၀င်လာကြတယ် ။ တချို့ကတကယ့်ကို ဆယ်တန်းတုန်းကတော်ကြပါတယ် ။ ဒါပေမယ့်ဆေးကျောင်း ပထမနှစ်ရောက်ပြီးက တည်းက ဂိမ်းလေးဆော့လိုက် ၊ ဖဲလေးရိုက်လိုက် ၊ ဆေးလိပ်လေးသောက်လိုက် နဲ့ပျက်ဆီးနေကြတော့ တာပါပဲ ။ ကျွန်တော်လား . . ကျွန်တော်လည်းကျောင်းသားတစ်ယောက် သူများတွေလို တက္ကသိုလ်ကျောင်း သား တွေရဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ဘ၀ဆိုလား အဲဒါကြီးကိုခံစားကြည့်ချင်လို့ ဒါတွေနဲ့မ လွတ်ကင်း ခဲ့တာဝန်ခံပါတယ် ။ ဆေးတက္ကသိုလ်ကြီးဆိုတာ ဒေါက်တာစိုးလွင်ပြောသလိုပဲ ပန်းခင်းလမ်းမ ဟုတ်သော မြေ ပါပဲ ။
ကျွန်တော်က ဆေး ၂ ဆိုတော့ဆေး၂အကြောင်းပဲပြောပြမယ် ။ ဆေး ၂က ကျဉ်းကျဥ်းလေးပါး Theater တွေ ကျပ်ညပ်နေပြီး လေးထပ်ဆောင်တွေအခုတော့တိုးချဲ့နေပါပြီ ။ ကန်တင်းလို့ခေါ် တဲ့စားသောက် ဆိုင်လေး ဆယ်ခုလောက်ကို ဆေးကျောင်းအနောက်မှာ တန်းစီထားတယ် ။ ဆေးကျောင်းအရှေ့ မှာ နေပူထဲကရေပန်းလေး ရှိတယ် ။ ဘေးမှာ ကလူနေရပ်ကွက်တွေ ။ ဂိမ်းဆိုင်တွေပေါတယ် အရက်ဆိုင်တွေပေါတယ် ။ ရဲစခန်းက မနီးမဝေးမှာရှိတယ် ။ အများစုပေါ့ အထူး သဖြင့်ကျောင်းသားတွေ လက်ချာမှန်မှန်မတက်ကြဘူး ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ စာကိုစိတ်မ၀င်စားလို့ ။ ဘာလို့စိတ်မ၀င်စားတလဲဆိုတော့အိမ်က အတင်းတက်ခိုင်းလို့ ၀ါသနာမပါလို့ ။ ကျောင်းသူတွေ ကတော့စာကြိုးစားကြတာများတယ် ။ ကျောင်းသားတွေက လက်ချာလစ်တယ် Theater လစ်တုန်း အနောက်မှာ ဖဲဝိုင်းထောင်တယ် ပါချုပ်က ခဏခဏမိတယ် ။ warning တွေအပေးခံရတယ် ။ ဂိမ်းဆိုင်ခဏခဏ သွားတယ် ။ ပိုက်ဆံ တက်နိုင်တဲ့ကျောင်းသားတွေက First year ကစပြီး ကျူရှင်ယူကြတယ် ။ တကယ်တော့ ဆေးကျောင်းကစာတွေဆိုတာ Self learning မှန်း ကျွန်တော်လည်း အတန်းကြီးလာမှ တဖြည်းဖြည်းသိလာရတာပါ ။ ဆေးကျောင်းနဲ့ကျူရှင် ဆိုတာ ဟာသပါလား လို့ ပြောစရာရှိတယ် ။ ဒါပေမယ့်ကျူရှင်ကတကယ်ရှိတာပါပဲ နောက်ဆုံး M.Med.Sc ကလည်း ကျူရှင်ရှိတာ ပါပဲ ။ ထားပါတော့ . . Roll Call မမှန်လို့ ဒီဘား ထိတဲ့ကျောင်းသားတွေ ၇န်ဖြစ်လို့ ကျောင်း ထုတ်ခံရတဲ့ကျောင်းသားတွေ အို . .စုံလို့ပါပဲ ။
ကျွန်တော်ပထမနှစ်တက်တုန်းက သင်္ချာသင်တဲ့ဆရာကပြောတယ် ။ "တပည့်တို့ ဆေးကျောင်းတက်တိုင်း ဆရာဝန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး ဆေးကျောင်းခရီးရှည်ကြီးဟာ တကယ်တော့ စိတ်ညစ်မှုတွေ ရွံ့တွေနွံ့တွေ ဆူးတွေ ခလုတ်ကန်သင်းတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ လမ်းပဲ လျှောက်ရင်းနဲ့ နွံနစ်သွားတဲ့သူတွေ ဆူးမိလို့ အနာဖြစ်သွားတဲ့သူတွေ ဒုနဲ့ဒေးပဲ ဒီတော့ . . . ဆေးကုချင်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကလေးကို သာ ပီပြင်အောင်မွေးမြူကြပါ နောက်ပိုင်းဆေးကျောင်းတက်ရတာပျော်လာပါလိမ့်မယ် သေချာတာ
ကတော့ဆေးကျောင်းတက် တိုင်း ဆရာဝန်ဖြစ်လိမ့််မှာမဟုတ်ဘူး " တဲ့ ။ သိပ်မှန်တာပါပဲ ။ ပထမနှစ်ကနေ နောက် ဆုံးနှစ်အထိလူတွေ တဖြည်းဖြည်းပြုတ်ကျလာလိုက်တာ နောက်ဆုံးအောင်တော့ လူက အနည်းငယ်ပဲကျန်တော့တယ် ။ ဒီတော့ ဆေးကျောင်းမှာ ဆိုးတဲ့ကျောင်း သားရော တော်တဲ့ကျောင်း သားရောရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ ။
- အတန်းချိန်မပြည့်လို့ Roll call မပြည့်တဲ့ကျောင်းသားတွေ ( ကျောင်းမထုတ်ခင် သူ့ history ကို လိုက်ရမယ် သူဘာလို့ကျောင်းပျက်တာလဲ ဆေးကျောင်းအပြင်မှာ စာကိုစိတ်မ၀င်စားပဲ ဝေလေလေ လုပ်နေပြီး ကျောင်း ပျက်နေတာလား ဒါမှမဟုတ် မိသားစုအရေး ငွေ အတွက် တကယ်ဆင်းရဲလို့ သူအလုပ်လုပ်နေရလို့ ကျောင်းတက်ချိန်မမှန်တာလား )
- သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကျောင်းစည်းကမ်းအရ စာမေးပွဲ အကြိမ်ကြိမ်ကျရှုံးနေသူတွေ ( ခွင့်လွှတ်စရာမရှိပါဘူး ထုတ်ကိုထုတ်ဖို့ လက်ခံပါတယ် ဆေးကျောင်းမှာ Moderation ဆိုတာရှိတယ် စာမေးပွဲမကျဖူး တဲ့သူမရှိပါဘူး ဒါပေမယ့် Moderation တွေကနေပြန်ပြန် ကယ်ရတာပါ ဆေးကျောင်းအောင်အမှတ်က တစ်ရာမှာ ငါးဆယ် ပါ ။ ၃ ဘာသာရှိရင် ၂ ဘာသာကျခွင့်ရှိတယ် ။ မော်ဒရေးရှင်းနဲ့တစ်လပြန် တက်ပြန်ဖြေရ တယ် ။ ၃ ဘာသာလုံးကျရင် တစ်နှစ်လုံးပြန်တက် ။ အဲဒီမှာ Failure လို့ခေါ်တဲ့ F တွေ သတ်မှတ်အကြိမ်ပြည့်သွားရင်ဆေးကျောင်းကထုတ်ပယ်ပါတယ် ။
- ရန်ဖြစ်ဆိုးသွမ်းတဲ့ မင်းမဲ့စရိုက်တွေ ( နောင်တချိန်မှာ လူ့အသက်ကယ်မဲ့လူတွေ မင်းမဲ့စရိုက်ပုံစံမျိုး အတန်းထဲကမှန်တွေရိုက်ခွဲတာ ထိုင်ခုံတွေဖျက်ဆီးအရက်တွေမူးပြီးရန်တွေဖြစ် ဒီအပြူအ မူတွေဟာ ဆေးကျောင်း သား တစ်ယောက်ရဲ့ Attitude နဲ့မကိုက်ညီလို့ ထိုက်ပယ်သင့်ပါတယ် )
ဆေးကျောင်းကနေ စည်းကမ်းနဲ့မညီလို့ ကျောင်းထုတ်လိုက်ပါပြီတဲ့ ။ ဆေးကျောင်းနဲ့မဆိုင်တော့ ဘူး ရောက် ချင်တာရောက်ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုလို့လည်းမဟုတ်သေးပါဘူး ။ သူတို့ရဲ့စာရိတ္တနဲ့ Attitude ကို ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲမပြောင်းလဲပေးနိုင်တော့ဘူးလား ။ Warning တွေထပ်ခါထပ် ခါပေးလို့မရလို့ ထုတ်တာသဘာဝကျပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ချက်ချင်း ပဲ ရန်တစ်ခါဖြစ်လို့ တစ်အုပ်စုလုံးထုတ် လိုက်တယ်ဆိုတာကတော့ နည်းနည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်ရအောင် ။ ပဲလှော်ကြားဆား ညှပ်တဲ့ ကျောင်း သားတွေလည်း ပါသွားနိုင်သလို . . . သူတို့ရန်မဖြစ်ရအောင် သူတို့အတန်းချိန်မှန်အောင် စာမေး ပွဲအောင်အောင် ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေ ဆက်လုပ်သင့်သလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းကို ရှာကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။
ပြုပြင်လို့ရသေးတဲ့ကျောင်းသားကို ပြုပြင်ပေးပြီးလမ်းမှန်ကို တည့်တည့်ရောက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရ မလဲဆို တာ အားလုံးဝိုင်းအဖြေရှာရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ တကယ့်ကိုဆေးစာတွေမမှီတော့လို့ စာမ ကျက်နိုင်တော့ လို့ စိတ်မ၀င်စားတော့ လို့ ကျောင်းကနေထုတ်ပယ် လိုက်ရတဲ့ ကျောင်းသားတွေ က ခြွင်းချက်ပါ ။ စာလည်းတော်တယ် လိုက်နိုင်တယ် ဒါပေမယ့်အကျင့်ဆိုးလေးတွေရှိနေတယ် ဒါဆို အဲဒီအကျင့်တွေကို ပယ်ဖျက်ဖို့ ဘာသာရေ့းဆိုင်ရာအချိန်လေးတွေ စာရိတ္တမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ အချိန်လေးတွေ ကျောင်း မှာ စည်းလုံးမှု နဲ့ လုပ်တဲ့ Gathering ပွဲကလေးတွေ ဆေးတက္ကသိုလ်ကြီးကို တက်နေရတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ ပျော်ဝင်လာအောင် နည်းလမ်းရှာကြဖို့ကျွန်တော် ကတိုက်တွန်း လိုပါတယ် ။
စာသင်တာ အားလုံးကောင်းကြတယ် ။ တချို့တလေကလွဲလို့ တပည့်တွေအပေါ် တော်စေ တတ်စေချင်ကြတဲ့ ဆရာတွေရဲစေတနာတွေကတော့ထပ်တူပါပဲ ။ နောက်ဆုံးတစ်မှတ်လေး ပဲ ဖြစ်ဖြစ် Moderation လေးပါရအောင် အောင်မှတ်လေးရအောင်သူတို့ Board ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာ ကြိုး စားပေးကြတယ် ။ ပြန်တွေးမိရင် ဆရာတွေကို ကျွန်တော်အခုထို မျက်ရည်ဝဲနေတုန်းပဲ ။ တကယ့်ကိုတော်တဲ့ ဆရာဝန်ကြီးတွေပါ ။ ကျွန်တော်တို့ ပါချုပ်ကအစ ဆရာတွေအားလုံးဟာ နာသုံးနာနဲ့ပြည့် ၀ကြသူတွေချည်းပါ ။ ဒါပေမယ့် အရှေ့မှာ စကားထောက်ခဲ့သလို တချို့သော ဆရာကြီးတွေ ကတော့ နည်းနည်လေး ခွဲခြားဆက်ဆံတာ ရှိခဲ့ပါတယ် ။ တော်တဲ့ကျောင်း သား မြေတောင်မြှောက်တယ် ဆိုးတဲ့ကျောင်းသားလက်တွဲမခေါ်ဘူး ။ အတန်းထဲပေးမ၀င် ဘူး ။ အချိန်ကို အရမ်းလေးစားတဲ့ဆရာကြီးတစ်ယောက်က တော့ လူ့အသက်ကယ်ရမယ့်ဆရာဝန်တွေဟာ အချိန်ကို တိကျလေးစားရမယ်ဆိုပြီး အတန်းထဲပေးမ၀င်လို့ အတန်းပြင်ကနေ တပည့်တွေက ငုတ်တုတ်စောင့် ရတယ်လို့ ကြားမိတယ် ။ ဆရာကြီးရေ . . . အချိန်ဟာ အရေးကြီးတာမှန်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် နောက် ကွယ်မှာ အချိန်နောက်ကျရခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေ ဆရာကြီးရော ကျွန်တော်ရောမသိနိုင် တာတွေအ များကြီးရှိနိုင်ပါတယ် ။ ဆရာကြီး ပေးမ၀င်လို့ရပ်စောင့်ခဲ့၇တဲ့ တပည့်တွေထဲမှာ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်လည်းပါပါတယ် ။ သူ့ က ဆေးကျောင်း တက်ရဖို့ အလုပ်စုံလုပ်ပါတယ် ။
မနက်ဆို အစောကြီး Guide သင်တယ် မုန့်ရောင်းတယ် တိုလီမိုလီအစုံလုပ်တယ် ။ သူ့အမေက အကြော်ရောင်း တယ် ။ အဲဒီနေ့က သူ့အမေ အကြော်ဆီအပူလောင်လို့ သူ ဆေးခန်းလိုက် ပို့နေရလို့သူအ ရမ်းတ က်ချင်နေတဲ့ဆရာကြီးရဲ့ လက်ချာကို နောက်ကျသွားပါတယ် ။ အတန်းထဲကို တံခါးပိတ်ပြီးသူ ၀င်ခွင့် မရဘူးလို့ဆိုပါတယ် ။ ဆရာ့အစီအစဉ်က ကောင်းပါတယ်ဆရာ ဒါပေမယ့် တချို့သော အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်စရာရှိတဲ့ကျောင်း သားတွေကိုတော့ခွှင့်လွှတ်ပေး ပါလားလို့ ကျွန်တော် က မေတ္တာ ရပ်ခံကြည်ချင်ပါတယ် ။ ဆရာတို့ ပညာတွေသင်ပေးခဲ့ကြလို့ ကျွန်တော်တို့အခု လို လူလိုသူလိုရပ်တည်နိုင်ခဲ့ကြတာပါ ။
ပြင်ညာရေးစနစ်နှင့် Professional ဟုခေါ်သော
လက်ရှိပညာရေးစနစ်ကို လူတွေက ပြင်ညာရေးစနစ်လို့မြင်လာကြတယ် ။ ကိုးဘာသာဖြစ်သွား လိုက် ခြောက် ဘာ သာဖြစ်သွားလိုက်နဲ့ နောက်ပြီး သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေက လည်း ခေတ်နဲ့ အမှီ လိုက်ပြောင်းနေကြလို့ မိဘတွေက လက်ရှိပညာရေးစနစ်ကို မယုံရဲကြတော့ဘူး ။ နိုင်ငံခြားကျောင်းတွေ အားကိုးလာကြတယ် ဆယ်တန်းအောင်ရင်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတဲ့အတွေး ၀င်လာကြတယ် ။ နိုင်ငံခြားလွှတ်ဖို့ ကိုပဲစိုင်းပြင်းလာကြတယ် ။ တက္ကသိုလ်ပညာရေးစနစ်ကလည်းဒီအတိုင်းပါပဲ ။ အဝေးသင်တွေအနီး သင်တွေ စာမေးပွဲကြီးကျမှ ကျူရှင်တက် အနီးကပ်နဲ့ အောင်သွားကြတယ် ။ ဒီတော့ဘ၀အတွက် အသုံးဝင်စရာ ဘာတွေများပါသွားသလဲ ။ အသိပညာ အတတ်ပညာတမျိုးမျိုး ဘာတွေပါသွားသလဲဆိုတာ စဉ်းစားစရာဖြစ်လာ ခဲ့တယ် ။ မြင်းကောင်းခွာလိပ် ဖြစ် သလိုဖြစ်ကြရတဲ့ ဆယ်တန်း အတန်းတင်ကိုလည်း ကျွန်တော်က ( ကျွန်တော့် အတွေးအရ ) စာမေးပွဲစနစ်ကိုလည်းပြောင်းကြည့်ချင်ပါတယ် ။ တစ်နှစ်လုံးစာမ ကျက်ကြဘူး အတန်းတင်နီးလာမှ Final နီးလာမှ စာကျက် ပြီး spot လိုက်ကြတယ် ။ တိုးတဲ့သူက အောင်မတိုးတဲ့သူကကျသွားကြတယ် ။ တကယ်ဆို ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ပညာရေးလို့ပဲ Final ကို ၃၀ %ပဲယူပြီးကျန်တဲ့တစ်နှစ်အတွင်းမှာ Pre test တွေ Tutorial တွေနဲ့ အမှတ်တွေကို စာတွေလက်တွေ့ နဲ့ ၆၀% ယူစေချင်ပါတယ် ။ ကျန်တဲ့ ၁၀% ကျတော့ကျောင်းတက်ချိန်ပါ ။အ ခုတော့ ကျူရှင်ပဲထားကြတယ် ကျောင်းကြီးတွေမသွားကြတော့ဘူး ။ စာမသင်လို့တဲ့ ။
စာမေးပွဲနီးလာပြီဆို အတန်းထဲလူမရှိတော့ဘူး ခြောက်ကပ်ကပ်ကျူရှင်တွေဝိုင်းတွေ မှာ လူတွေအပြည့် ။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာတော့ တစ်ခုခုလစ်ဟာ ဆုံးရှုံးနေရသလိုပါပဲ ။ Professional ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကျွန်တော်တို့ဆက်ရအောင် ။ ဆရာဝန်ဆိုတာ ပျော်စရာဘ၀ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး ။ သူများ တွေအားနေ တဲ့အချိန်ကိုယ်စာဖတ်ရတယ် သူများ ပျော်နေတဲ့အချိန်ကိုယ်စာဖတ်ရတယ် ရပ်သွားတယ်မရှိဘူးရှေ့ ကိုအမြဲသွားနေရတယ် ။ လူနာတွေနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါ ဆီး သွေး မစင်ကအစ ထိတွေ့ရတယ်အ နာတြွေုပည် ပုပ်တွေ နဲ့ လက်ပွန်းတတီးနေရတယ် ။ အိုဂျီမှာဆိုပိုဆိုးသေးတယ် ။ ဒီတော့ ဒီလိုဘ၀ ဟာ ပျော်စရာကောင်း တယ်လို့ ဘယ်သူကပြောသလဲ ။ တကယ်တော့ ပျော်စရာကောင်း တယ်ဆိုတာ လူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ကို ကိုယ်ကယ်လိုက်နိုင်တဲ့ အချိန်မှသာ စပြီးသိလာနိုင်တာပါ ။ ကုသိုလ်လည်းရ ၀မ်းလည်းဝဆိုတဲ့စကားအတိုင်း ကိုယ်ဟာ Professional လို့လူတွေပြောနေကြတဲ့ ကျွမ်းကျင် ပြည့်ဝသော ဆရာဝန်ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းတော့မယ်ဆိုရင် အရာရာကို ရင်ဆိုင်နိုင်ရတော့မှာပါ ။ နောက်တစ်ခု ဆရာဝန်နဲ့နိုင်ငံရေး ကိုလည်းနည်းနည်းပြောချင်သေးတယ် ။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ နိုင်ငံထဲမှာ နေတဲ့နိုင်ငံ သူနိုင်ငံသားတွေလုပ်နေတဲ့အရေးပါ ။ ဆရာဝန်ကဆေးကုတယ် အင်ဂျင်နီယာက တိုက်ဆောက်တယ် ရုံးသမားက ရုံးအလုပ်လုပ်တယ် စစ်သားကစစ်တိုက် တယ်ရဲကလူဆိုးဖမ်းတယ် ဒါတွေအားလုံးနိုင်ငံရေးတွေချည်းပဲ ။ ကိုယ်နဲ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာလုပ်နေကြတာ အကုန်လုံးနိုင်ငံရေးတွေချည်း ပဲလို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတစ်ခု တည်ဆောက်ရေးမှာ ဆရာဝန်ဆိုတာ ကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ပဲပါပါလိမ့်မယ် ။ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍပေါ့ ။
ကဏ္ဍ အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ နိုင်ငံရေး နယ်ပယ်မှာ ဆရာဝန်သက်ဆိုင်တာကျန်းမာရေူးကဏ္ဍ ဖြစ်ပါတယ် ။ Policy Making တွေ Rules and regualtion တွေ တကယ့်ကို တခြားလိုင်းတွေကတော့ ဆရာဝန်တွေနဲ့သိပ်တော့မ သက်ဆိုင်ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် Impact တော့ရှိတာပေါ့ ။ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ကို နယ်မှာ ဘယ်နှစ်နှစ်ထားရမယ် ဟိုပို့ဒီပို့လုပ်တဲ့ Strike လုပ်တဲ့ ဒါဏ်ကိုတော့ဆရာဝန်တွေ ခံနိုင်ရပါလိမ့်မယ် ။ နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအပိုင်းမှာ ဆရာဝန်တွေအများကြီးလိုနေပါတယ် ။ ဒါဆို ဘာလို့ လက်ထောက်ဆရာဝန်တွေမခေါ်တာလဲ ။ ခေါ်ပါတယ် တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုသတ်မှတ်ထားသလောက်ခေါ်ပါတယ် ။ မလောက်ပါဘူး ။ အပြင်မှာ နေနေကြတဲ့ PSC မအောင်လို့ တခြားနယ်ပယ်တွေရောက်နေကြတဲ့ဆရာဝန်တွေတပုံကြီးရှိနေကြသေးတယ် ။ ကျွန်တော် PSC ဖြေတုန်းကအမှတ်တရလေးပြောချင်သေးတယ် ။ ကျွန်တော့်ကို ရှေ့မှာ ထိုင်နေတဲ့ဆရာကေ မး ပါတယ် ။ " ရန်ကုန်နဲ့ နေပြည်တော်အကွာအဝေး " ဖြေနိုင်ပါတယ် ။ " တံတားဘယ်နှစ်စင်းဖြတ်ခဲ့ရသလဲ " ဖြေနိုင်ပါတယ် ။ " အဲဒီတံတား တွေရဲနာမည် တွေပြောပြပါ " ဖြေနိုင်ပါသေးတယ်။ စိတ်ထဲလည်း လက်ထောက်ဆရာဝန်လုပ်ရမှာ လူနာတွေဆေးကုရမှာ ဒါတွေက တကယ့်ကိုလုပ်အပ်လို့မေးနေ တာလား တွေးမိတယ် ။ ဥပမာ ငှက်ဖျားဘာလို့ဖြစ်တယ် သွေးလွန်တုပ်ကွေးအကြောင်းတွေမေးပါ ကျွန်တော်တို့ မဖြေနိုင်ရင် လက်ထောက်ဆရာဝန်လုပ်ခွင့်မပေးပါနဲ့လက်ခံပါတယ် ။
ဆက်မေးပါတယ် " အဲဒီတံတားတစ်စင်းစီရဲ့အရှည်ကို ရွတ်ပြပါ " မဖြေနိုင်တော့ပါဘူး ။ ဆက်ပြီးစဉ်းစား ရင်တော့ကျက်ထားတာလေးတွေပေါ်လာနိုင်တယ် ။ အရည်အချင်းပြည့်မှီပါတယ်ဆိုပြီး ဆမ လက်မှတ်ပေး ထားပြီးပြီး ဆေးပညာဘွဲ့ပေးထားပြီးမှ PSC ကမေးခွန်းတွေမဖြေနိုင်လို့ လက်ထောက်ဆရာဝန် မဖြစ်လိုက်ရတဲ့ဆရာဝန်တွေအတွက်လည်း ၀န်ကြီးအနေနဲ့ တစ်ခုခုတော့စဉ်းစားပေးစေချင်ပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် M.Med.Sc အတွက် ၀င်ခွင့်တံခါးပေါက်ဖြစ်တဲ့ လက်ထောက်ဆရာဝန်ဖြစ်ခွင့်ဟာ ဆရာဝန်အများ စုအတွက်ခက်ခဲနေတုန်းပါပဲ ။
အစအဆုံးဖတ်ပေးကြတဲ့စာဖတ်သူများကို လေးစားစွာ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် ။ ရေလိုအေးလို့ ပန်းလို မွှေးနိုင်ကြ ပါစေခင်ဗျာ ။
May February 9, 2013 at 12:41 PM
PSC က ဆရာဝန်တွေမှမဟုတ်ဖူး Engineer တွေလဲဖြေရတဲ့ခပ်ကြောင်ကြောင်စာမေးပွဲတခုပေါ.
Subject Matter မေးရမဲ့အစား ရာဇ၀င်မှာစာတင်လောက်တဲ့မိန့်ခွန်းရှည် ကြီးတွေကို ကြက်တူရွေးစာအံကျက်ပြီးဖြေရသေးတယ်။
really nice post Doc...!!!
education in myanmar is so bad these days...
point of view...damn cool!!
မိုးနတ်ကြယ်စင် February 10, 2013 at 5:43 PM
ခေါင်းစဉ်ကို မြင်ကတည်းက စိတ်ဝင်စားနေတာ..
မှန်လိုက်လေခြင်း ဆိုပြီး သက်ပြင်းချသွားတယ်...
အဲဒါတွေ အဲဒါတွေ အားကြီးခက်တယ်...
ညလေးတို့ တိုင်းပြည်ကြီးလဲ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ကို
ငပြောကြီး April 21, 2014 at 5:40 AM
Facebook တွင် Update များဖတ်ရန် like နှိပ်ပေးပါ ။ ဆိုပြီးတော့ ဘာလင့်ခ်မှ မတွေ့ရပါ။
နော်ဝေးမှာ ဆန္ဒပြတာ နဲ့မတူဘူး သမ္မတကို စော်ကားတာနဲ့တ...
ဒီစစ်ပြီးတဲ့အခါ . . .